यी चार राशीले निकै नै धन कमाउँछन् हेर्नुहोस् कतै तपाईको राशी त परेन
१. वृष – धनको सम्बन्ध दोस्रो र आठौं स्थानमा रहेका राशीसँग जोडिएको हुन्छ । यही भएर दोस्रो स्थानमा रहेको वृष राशी हुने मानिसले धन कमाउने योग बढी हुने गर्छ । वृष राशीको गुरू शुक्र भएका कारण पनि यो राशी हुने मानिसहरू आकर्षक र महंगा सामान किन्न सौखिन हुन्छन् । वृष
दुखद खबर : टिप्परको ठक्करबाट १२ को परीक्षा दिएर फर्कदै गरेकी बिद्यार्थीको मृत्यु
बुटवलको जितगढीमा टिपरको ठक्करबाट एक युवतीको मृत्यु भएको छ । बुटवल उपहानगरपालिका-१२ तामनगर बस्ने १९ वर्षीया पुष्पा भण्डारीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । मृतक भण्डारी कक्षा १२ को परीक्षा दिएर वुवासंग घर फर्कदै थिइन् । बुटवलबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको लु४५प ७२३४ नम्बरको स्कुटरलाई सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको टिपरले ठक्कर
वैज्ञानिक चकित : संसारकै एक यस्तो मन्दिर जहाँ मूर्ति मानिस झै बोल्छ !
तपाईले धेरै देख्नुभयो होला । आज हामी त्यस्तो मन्दिरका बारेमा जानकारी दिँदैछौ जुन तपाईलाई थाहा छैन । संसारमा एक यस्तो मन्दिर छ जहाँ मूर्ति मानिस झै बोल्छ । पहिला यो कुरामा धेरैलाई पत्यार लागेन । तर, अहिले भने वैज्ञानिकहरुले पनि त्यो मन्दिरमा मूर्ति बोल्छ भन्ने कुरा पत्याए । मन्दिर परिसरमा
बिहान-बिहानै देखिएको यस्तो सपनाले बनाउँछ करोडपति !
सपना सबैले देख्ने गर्छन् । अवचेतन मनमा भएका कुरालाई हाम्रो अगाडी ल्याएर देखाउने माध्यमलाई सपना भनिन्छ। यस्तै हरेक समयमा देखिएको सपनाको आ आफ्नै महत्व हुन्छ। ज्योतिष शास्त्रले बिहान देखिएको सपना सत्य साबित हुने गरेको बताएका छन्। यदि तपाईले बिहानको समयमा यस्ता सपनाहरु देख्नु भएको छ भने त्यो सपना तपाईको लागि
भनिन्छ, कर्मभन्दा ठूलो कुनै धर्म हुँदैन, तर हिन्दु धर्ममा कर्मका साथ–सार्थ धर्मको पनि खास महत्व हुन्छ । त्यस्तै, हिन्दुधर्ममा मांगलिक प्रतीकहरुको आफ्नौ महत्व हुन्छ । यस्ता प्रतिक, वस्तुहरु राख्नाले कुनै पनि काममा अवरोध आउँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ। ओम सर्वोपरि मंगल प्रतीक यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रतिक हो । अ,उ,म तीन शब्दबाट
बिहान उठ्ने बित्तिकै यी काम गर्नाले हुन्छ निकै फाइदा
बिहान दिनको प्रतिक हो । नयाँ दिनको सुरुवात हो । त्यसैले बिहानको समयलाई मानीसहरु प्रेम गर्छन् । दिन शुभ रहोस् भन्ने कामना गर्छन् । दिन शुभ हुनका लागि तन्दुरुस्त शरीर चाहिन्छ । शारिरीक व्यायमले शरिर फुर्तिलो बनाउँछ । त्यसैले बिहानको समयमा अधिकाँस मानीस शारिरीक व्यायममा केन्द्रित हुन्छन् । व्यायमसँगै पुजापाठमा
यो हो संसारकै सबैभन्दा महंगो भगवान गणेश जीको मुर्ति, जसको मूल्य सुन्दा जो कोहि चकित पर्छ !
संसारकै सबैभन्दा महंगो मुर्ति कसको होला ? गणेश भगवानको । भारतको गुजरातको सूरत शहर हीरा नगरीको रूपमा चिनिने यो मुर्ति मानव निर्मित नभई प्राकृतिक रुपमा नै फेला परेको हो । ﻿ ६०० करोडको गणेश जीको मुर्ति १२ बर्ष देखि सूरतका प्रसिद्ध हीरा व्यापारी कनुभाई आसोदरियाको घरमा रहेको भारतिय मिडियाले जनाएको
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) : प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । विभिन्न सहयोग र उपहार पाइनेछ । प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो बनाउनेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ । व्यापार–व्यवसायमा विशेष लाभ लिने समय छ । व्यावसायिक यात्राको
सजिलैसँग मायामा फस्छन् यी राशि भएका व्यक्तिहरु !
हरेक राशिका प्रेमप्रतिको व्‍यवहार र रुचि फरक फरक हुन्छ । कोहि मायामा साह्रै नै इमोशनल हुन्छन् त कोहि रोमान्सको लागि धेरै रुचि राख्दैनन् । ज्योतिष शास्त्र अनुसार केहि यस्ता राशि छन् जुन राशि भएका मानिसहरु सजिलैसँग प्रेममा पर्छन् । मिथुन भनिन्छ यी राशि भएका मानिसहरु चाँडै नै मायामा पर्छन् र